Rahoviana no tokony havaozina ny sary famantarana? | Famoronana an-tserasera
Ny maha-orinasa azy dia taratry ny orinasa na andrim-panjakana rehetra. Rehefa misy mpamorona miatrika ny fananganana singa misy ny maha-izy azy toy ny sary famantarana, dia tojo fanamby amin'ny fananganana zavatra tsy maharitra sy maharitra mandritra ny fotoana izy. Noho izany dia tsy maintsy fananganana mahery vaika, maharitra ary misolo tena ny mpanjifa voalaza izy io. Na izany aza, vitsy dia vitsy ireo logo izay mijanona hitovy tanteraka mandritra ny androm-piainan'ny orinasa iray. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana daty lany daty. Miova ny fotoana mitovy amin'ny fiovan'ny fironana sary sy hatsarana. Tokony hekentsika ihany koa fa ny orinasa, ny tompona, ny tanjon'ireo orinasa, ny mpijery izay itodihan'ny orinasa ary mazava ho azy fa miova ny toe-javatra. Fa maninona no tsy tokony hiova ny sary famantarana?
Na izany aza, tsy midika izany fa tokony hanova tanteraka ny sary famantarana isika. Amin'ny ankapobeny, rehefa misy fanavaozana endrika dia tsy tena fanovana lehibe no fanovana no atao fa mifanaraka amin'ny fitakiana sasany. Ny fanontaniana lehibe mipetraka ankehitriny dia ny fotoana tokony handinihantsika ny fanavaozana an'io karazana io. Misy tondro vitsivitsy izay mampitandrina antsika fa tonga ny fotoana hanovana ny sarin'ny orinasa iray:
1 Toa tsy dia matihanina araka ny tokony ho izy ny sary famantarana ahy
2 Niova ny orinasako
Toa tsy dia matihanina araka ny tokony ho izy ny sary famantarana ahy
Orinasa marobe, indrindra ireo manana refy kely sy fanokafana vaovao, no manomboka misafidy ny hampivelatra ny mari-pamantarana azy ireo. Na izany aza, tsy mora ny manao famolavolana tsara ary na dia toa toa izany aza ny ankamaroan'ny olona, ​​raha ny tena izy dia mila fahalalana momba ny fanoharana, fanovana ary marketing ianao. Tsy hafahafa ny mahita ireo orinasa manokatra varavarana amin'ny alàlan'ny sary tsy mendrika, tsy azo vakina ary mety amin'ny loha. Raha izany no trangao ary mitady hanana endrika matihanina sy matotra kokoa ianao dia izao no fotoana mety hanombohanao handinika azy io ary hanakarama mpamorona matihanina.
Niova ny orinasako
Ny orinasa dia tsy maintsy miova sy manao fanovana tsy tapaka mba tsy ho tapaka eo amin'ny tsena. Ny marina dia misy faritra maro ahafahana manisy fanovana, raha ny marina dia miova ny orinasa nefa tsy tsapany fa miova izy ireo mba hifanaraka amin'ny fangatahana manokana sy ho an'ny daholobe. Mazava ho azy fa ny fanovana madinidinika rehetra mitranga dia tsy mila mihena ho fiovana amin'ny mombamomba ny orinasa, ho hadalana ihany satria tsy mamokatra. Na izany aza, raha misy fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ny orinasa dia ilaina ny taratry ny toetrantsika amin'ny orinasa. Ny sasany amin'ireo fanovana ireo dia:
Fanitarana: Andao alao sary an-tsaina fa ny orinasa iray dia miala amin'ny fitaomana eo an-toerana ka hatramin'ny sehatra nasionaly, na amin'ny sehatra nasionaly ka lasa lasa iraisam-pirenena. Ny hatsarana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ity fomba vaovao ity satria hiatrika endrika hafa, tanjona samihafa ary mazava ho azy fa hahazo fahaiza-manao sy fahaiza-manao vaovao koa izy. Tokony ho hita taratra amin'ny endrik'ilay orinasa izany.
specialization: Amin'ny alàlan'ny fanabeazana manokana dia manova endrika maro amin'ny orinasantsika izahay, raha ny tena izy dia manova ny mpihaino kendrena, ny serivisy na ny vokatra natolotra anay, ny paikadim-barotra na ny soatoavina mihitsy. Ireo rehetra ireo dia zava-dehibe indrindra handinihana ny fanavaozana ary hampita amin'ny besinimaro sy ny ho avy mpanjifa ny rivotra na tonika vaovao an'ny orinasa.
Andalana vaovao: Rehefa mandeha ny fotoana dia mihamatotra sy miova ny zava-drehetra, na ny fanirian'ny tompony aza. Izy io dia azo adika amin'ny karazana fanovana rehetra na amin'ny filozofia, ny soatoavina harahina sy ny tanjona. Amin'io lafiny io, ny graf dia manana singa ara-psikolojika tsy azo lavina ary tsy maintsy manome fifanarahana eo amin'ny soatoavina sy ny filozofia ary ny fomba hisoloana azy ireo isika. Raha tsy izany ny zava-misy dia tsy ho voasarona ny tanjon'ny fifandraisana.
Raha miseho ny olana eo amin'ny laza: Tsy ny fanovana rehetra no tsara, raha ny marina dia misy koa ny krizy isan-karazany. Ny krizy anatiny dia matetika iray amin'ireo antony mitaky fanovana ny seho sy ny sary miaraka amin'ny mahamaika kokoa. Indrindra amin'ireo tranga ireo izay nampifandraisina tamin'ny lazany ary ny sary ankehitriny dia tsy maharesy lahatra na mifandray amin'ny traikefa ratsy, fahatsiarovana ary foto-kevitra ratsy.
Raha very ny anjaran'ny tsena isika: Rehefa very ny mpanjifa, ny iray amin'ireo singa manan-kery indrindra azontsika ampiasaina mba hahazoana azy ireo indray dia ny fifandraisana, dokam-barotra, marketing ary fandresen-dahatra. Mazava ho azy, ny sary sy ny famolavolana sary famantarana amin'ity lafiny ity dia tena zava-dehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rahoviana no tokony havaozina ny sary famantarana?